Intali n'oge ọrịa COVID-19 coronavirus na-efe efe
Location: Mbido » Ịdee » Na-agbasa News Travel » Intali n'oge ọrịa COVID-19 coronavirus na-efe efe
Izu a, Italy nọ na-asọpụrụ ndị nwụrụ site na COVID-19 coronavirus site na-efe ọkọlọtọ na ọkara mast. Ọtụtụ mmadụ butere ọrịa ahụ na mba ahụ gụnyere ndị ọrụ ahụike. Lombardy, mpaghara ugwu Italy gburugburu Milan, bụ mpaghara kachasị emetụta ọrịa ọrịa COVID-19 coronavirus. Northern Italy banyere mkpọchi mberede na mbido ọnwa gara aga, gọọmentị wee gbasaa kwarantaini na mba niile ụbọchị 3 ka emechara.
Enwere ike igbochi ọnụọgụ nke ọnwu ma ọ bụrụ na enyere ndị nchekwa nchekwa. Nke a bụ otu ọnọdụ na Spain. Italslọ ọgwụ gafee mba na mba ndị ọzọ na-eji ihe mkpuchi mkpuchi snorkeling gbanwere ka ọ bụrụ ihe nkpuchi ventilat.
A nnukwu echiche nke malitere na Italytali
Dika ulo ogwu chere otutu ndi oria COVID-19 aka mgba iku ume, ndi oru ogwu ohuru na-echighari na nkpuchi ndi ozo site na ulo ahia ka ha ghara ikwuputa ngba ha ka ha ghara ida, ebe ulo ogwu di na mba ndi ozo na-achota ma tinye aka ha. .
A manyere Exlọ Ọrụ Ngosi Ihe Omume nke Milan ka ọ gbanwee n'ụlọ ọgwụ nwere akwa akwa nlekọta 200 kpụ ọkụ n'ọnụ. Usoro nlekọta ahụike Italiantali bụ otu n'ime ụwa kacha mma, mana ọrịa mgbasa COVID-19 coronavirus egbuola ndụ ndị dọkịta 61. Izu ụka ole na ole ugbu a, ndị dọkịta Italiantali nọ na-agwa mba ndị ọzọ ka ha nọrọ n’ụlọ. Ozi ahụ bụ "Biko nọrọ n'ime, mụta ihe n'aka anyị."
Site na akụ na ụba na-akwụsị, ịgafe ókèala Switzerland na ọnụọgụ ndị 67,000tali XNUMX na-agafe kwa ụbọchị iji rụọ ọrụ na Switzerland abụghịzị okwu. Emechiri ókèala Switzerland - enweghị ọrụ, ọ bụ naanị oge ị ga-aga.
Na Tuscany, ebe ezumike mara mma nke dị n'akụkụ mmiri Forte di Marmi na-etinye ezigbo ego nke 500 € maka ndị na-azụ ahịa na-abanye na nnukwu ụlọ ahịa na-enweghị mkpuchi.
Alitalia, ụgbọ elu mba nke istali na-efe efe na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụgbọ mmiri ya niile na pasent 10 bi.
Luxuottica a ma ama - ugogbe anya - na-ebelata ụgwọ ọnwa nke ndị njikwa ya kachasị elu.
Na Bergamo, nke bu oria ojoo a, oria nke lanariri agha uwa nke abuo ka nje a kpochapuru.
Gwa ndị fromtali okwu site na ugwu ruo na ndịda, onye ọ bụla kwenyere na nke ahụ bụ ezigbo ụzọ gọọmentị Governmenttali na-ewere na ịnọ n'ime ya kachasị mkpa.
N'ime obodo dị nso na Bergamo ebe onye na-eme achịcha nwụrụ site na ọrịa COVID-19 coronavirus, onye Maitre kacha mma nke Italy n'afọ 2016 gwara m na ọ na-amụta ime achịcha ugbu a. Ma ọ dịghị ntụ ọka ndị ọzọ na-ekwu.
Ọdọ mmiri Como nke kachasị adọrọ adọrọ n’ụwa niile aghọọla ọdọ mmiri. Enweghị ụgbọ mmiri, enweghị ụgbọ ala, enweghị igwe kwụ otu ebe, na enweghị ndị mmadụ. Hotelslọ nkwari akụ niile, ụlọ ahịa, na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ areụ emechiela. Nnụnụ na-abụ abụ anọchiwo ụda nke ụgbọ mmiri Riva, ụgbọ mmiri, na ụgbọ ala. Enweghị mkpụrụ obi a ga-ahụ. Ọ dị ezigbo njọ ma bụrụ eziokwu.
Mana okike na-eweta olile anya na ifuru rhododendron na azaleas iguzogide tristesse Italy na-eche ihu. Dị ka n’oge, olile-anya na-adịru mgbe ebighi ebi.
Dika edere ya, odighi mba obula oria ojoo a, onu ogugu ndi kachasi nma gafere otu nde akara gburugburu uwa.
Na foto dị na mbụ, agba atọ nke ọkọlọtọ Italiantali - akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọcha, na uhie - na-apụta na ihe ncheta n'akụkụ Italytali niile yana mba ọzọ iji kwado mba ahụ n'oge nsogbu COVID-19. Na Rome, isi ihe ncheta 3 na-enwu n'abalị - ụlọ ọrụ gọọmentị na Palazzo Chigi, Senate, na Campidoglio - etiti gọọmentị obodo Rome. Ha ga na-enwu gbaa ruo mgbe nsogbu ahụ gwụsịrị.
Ọdọ Como - Foto © Elisabeth Lang
Covid-19 Government Italy Milan Switzerland agha Agha Ụwa nke Abụọ
Ọnọdụ ụgbọ mmiri Eprel: Mgbanwe dị mkpa na windo ntinye akwụkwọ maka njem njem
Rgbọ elu Russia Rossiya ụgbọ elu na-ebepụ ụgbọ elu ndị dị na East East n'ihi ndalata na ọchịchọ